तिव्र यौनइच्छा हुने समस्या छ… एक पटक अवश्य पढ्नुहोस् | पश्चिम सन्देश
तिव्र यौनइच्छा हुने समस्या छ… एक पटक अवश्य पढ्नुहोस्
प्रश्न : ममा बढी यौन उत्तेजना एवं धेरै महिलासँग यौनइच्छा हुने समस्या छ । जब मेरो श्रीमतीसँग पहिलो भेट भएको थियो तबदेखि विवाह गरेको तीन वर्षसम्म हामीबीचको यौनसम्बन्ध निकै राम्रो रह्यो । किन हो, हिजोआज उनीसँगको यौनसम्बन्धमा मलाई कुनै इच्छा हुँदैन । हाल मेरो एक जना महिलासँग दुवैको सहमतिमा यौनसम्बन्ध रहँदै आएको छ । पहिले त मेरो उमेरका कारणले यौनइच्छा फरक–फरक महिलासँग भएको हो कि जस्तो लाग्थ्यो तर हिजोआज यस्तै विचार कायम रहे अन्य समस्या आउँछ कि जस्तो लाग्छ र श्रीमतीसँगको सम्बन्ध अझ बिग्रने डर लाग्छ । मलाई किन यस्तो भएको ?
तपाईले उल्लेख गरेको समस्याका सम्बन्धमा धेरैले जिज्ञासा राखे पनि यस्तो खालको समस्या सबै पुरुषमा हुँदैन । केही व्यक्ति एउटै पार्टनरसँग वर्षौंसम्म उत्तिकै र उस्तै खालको यौनचाहना भएको बताउँछन् र उनीहरूलाई एउटै पार्टनरसँग यौनसम्पर्क गर्दा मात्र पर्याप्त आनन्द आउँछ । मानव यौनिकतामा धेरै विविधता छ र कुनै एउटा उदाहरणलाई शतप्रतिशत सही मान्न सकिँदैन ।
अब तपार्इंको जिज्ञासातर्फ लागौं । यदि तपाईंहरूले एक–अर्कासँग मात्र यौनसम्बन्ध कायम गर्ने हो भने नयाँ यौनसम्पर्कका नौला विधिहरूका सम्बन्धमा छलफल गर्न सकिन्छ । वास्तवमा धेरै जोडी जो एक–अर्कासँग लामो समयसम्म यौनसम्पर्कमा सन्तुष्टि भएको बताउँछन्, उनीहरूमा नयाँ र उत्साहित यौन क्रियाकलाप भैरहने अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् । तपार्इंहरूको जीवनमा उत्साहित र उत्तेजना महसुस गर्न यौन विविधता र नयाँपनको आवश्यकता हुन सक्छ ।
अनुभवको साटासाटले नयाँ अनुभव गराउँछ । अर्कातिर धेरै केटीहरूसँगको सम्पर्कले तपाईंको शारीरिक तथा सामाजिक जीवनमा असर पर्न सक्छ भने यौन रोगको संक्रमण हुने खतरासमेत हुन्छ । यसले गर्दा तपाईंमा पश्चातापको भावना विकसित हुन सक्छ । बाहिरबाट अरू व्यक्तिले तपाईंको मानसिकताका बारेमा बुझ्न नसक्दा आक्षेपको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यतिमात्र होइन, कानुनी झन्झटमा परिने खतरा पनि हुन्छ । तपाईंमा यौन चाहना तीव्रता पनि हुन सक्छ, जुन असामान्य व्यवहार होइन ।
आफ्नी श्रीमतीबाहेक अरूसँगको यौनसम्बन्धले तपाईंमा डर, चिन्ता तथा ग्लानिको भावना सिर्जना हुन्छ । यस्तो भावनाले तपार्इंहरूबीचको यौनसम्बन्धमा मात्र होइन, तपाईंको दैनिक क्रियाकलापमा समेत असर गर्न थाल्छ । यसको निवारण छिटो हुनु बेस हुन्छ ।
अहिले तपाईंहरूबीच कुनै चिन्ता, मतभेद वा झगडा छ कि त्यो पनि प्रस्ट हुन जरुरी हुन्छ । एक–अर्काप्रतिको आकर्षणमा कमी आएको हुन सक्छ । तिनीहरूका बारेमा पत्ता लगाउने र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नेतर्फ जोड दिनुपर्ने हुन्छ । हाम्रो समाजमा धेरै मानिस दुई दम्पतीबीचको सम्बन्धमा पनि सामाजिक व्यवहार, सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक हैसियत आदिलाई ध्यान दिन्छन् तर प्रेमपूर्ण संवाद, एक–अर्काप्रति व्यक्त गरिने आदर, सम्मान एवं यौनसम्बन्धलाई त्यति महत्व दिइएको पाइँदैन । एकअर्कालाई राम्रोसँग बुझ्ने प्रयास नगर्दा पारिवारिक असन्तुष्टि र कलह हुन्छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर यौनसम्बन्धमा पनि पर्छ । तपाईंको समस्याको वास्तविकतामा पुग्नुअघि यस्ता धेरै विषय केलाउनुपर्ने हुन्छ ।
चरम रमाइलोपन र उच्चस्तरको सन्तुष्टि प्राप्त गर्नेमा दुई जनाबीचको गुणस्तरीय संवाद गर्ने सीप नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । विवाहपछिको यौनसम्बन्धका बारेमा विभिन्न अध्ययन भएका छन्, ती अध्ययनअनुसार लगभग ८० प्रतिशत विवाहको दुईदेखि तीन वर्षको अवधिसम्म भनेको एक–अर्काप्रतिको आकर्षण, रमाइलोपन कायम रहने अवस्था हो । त्यसकारण तपाईंमा यौन निष्क्रयतासम्बन्धी कुनै समस्या भएको हुन सक्छ ।
हरेक व्यक्तिले बुझ्नैपर्ने कुरा के हो भने समयअनुसार आफूलाई समायोजन गर्दै लगेका छन् कि छैनन् ? लामो समयसम्म समस्या कायम राख्दा ग्लानि, हीनताबोध एवं दम्पतीबीचको समझदारीमा कमी आउन थाल्छ । त्यसैले यदि कुनै उपाय सुझेको छैन भने मनोविद् वा मनोचिकित्सकसमक्ष गएर आवश्यक परामर्श लिनु उपयुक्त हुन्छ ।
प्राइम कमर्सियल बैंक सहित ४ वित्तीय संस्थाको शेयर नेप्सेमा सूचीकृत, कस्को...
मुल्यसूचि नराख्ने नेपालगञ्जको एक हार्डवेयर पसललाई ६० हजार जरिवाना
slide 31 May 2020